Sh Fu'aad Maxamed Khalaf "Wararka ah in aan dhintay Sal iyo raad toona maleh" – SBC
Sh Fu'aad Maxamed Khalaf "Wararka ah in aan dhintay Sal iyo raad toona maleh"
Sh Fu’aad Maxamed khalaf oo ka mid ah Saraakiisha Sar sare ee Xarakada Shabaab Almujaahidiin ayaa ku tilmaamay war aan sal iyo raad toona la heyn, wararka sheegaya in uu ku geeriyooday Dagaalkii ka dhacay Caasimada gobolka Gedo ee Garbahaarey, dagaalkaas oo dhexmaray ciidamada DKMG ah iyo xarakada Alshabaab.
Sheeq Fu’aad Maxamed Khalaf ayaa hadalkan sheegay ka dib shir Jaraaid oo uu saxaafada ugu qabtay magaalada Muqdisho.
Waxaanu shirkiisa jaraaid ku soo hadal qaaday dagaalada 3dii maalin ee ugu dambeeyay ka dhacayay Magaalada Garbahaarey, isagoona sheegay in dagaalkaasi uu dhacay balse uusan isagu wax qasaare ah ka soo gaarin .
Sidoo kale sheequ ma soo hadal qaadin khasaare kale oo halkaasi ka soo gaaqay qaar ka mid ah saraakiisha xarakada .
Hadalka Sh Fu’aad Maxamed Khalaf oo ka mid ah Saraakiisha Sar sare ee xarakada Alshabaab ayaa imanaya ka dib markii saraakiil ka tirsan Ciidamada DKMG ee ka dagaalamaya gobolka Gedo ay sheegteen in dagaaladii ka dhacay gobolkaas ay ku geeriyoodeen qaar ka mid ah saraakiisha sar sare ee Xarakada Alshabaab uuna ku jiro Sh Fu’aad Maxamed Khalaf .